Mahafinaritra ny fiainana rehefa mianatra ny ho tsara amin'ny tenanao tahaka ny an'ny hafa ianao. - Anony - Quote Pedia
Mahafinaritra ny fiainana rehefa mianatra ny ho tsara amin'ny tenanao tahaka ny an'ny hafa ianao. - Anonyme
Ny fitiavana ny tena dia zavatra iray lehibe saingy matetika isika tsy miraharaha azy io eo afovoan'ny fitazonana hatrany ny fifandraisana samy hafa eo amin'ny fiainana. Mahatsapa ianao fa zava-dehibe ny fitazonana ireo fifandraisana ireo satria izy ireo no tena tianao sy tadiavinao indrindra.
Fa tokony ho azonao an-tsaina fa mila mikarakara tena tahaka ny fikarakarana ny hafa ianao. Makà fotoana hiarahana amin'ny tenanao irery. Mifandraisa amin'ny tena tianao ary mirotsaka aminy. Manomeza toerana hitombo sy hahafantatra ny tenanao.
Rehefa mitia ny tenanao fotsiny ianao dia ho afaka hitia tsara ny hafa. Tsy midika kosa izany hoe harahintsika fotsiny ny momba antsika. Midika izany fa ny fampidirantsika ao anaty lisitry ny laharam-pahamehana ihany koa. Mety ho tsy mitombina izany fa matetika isika dia manadino ny laharam-pahamehana ho loha laharana eo amin'ny fiainam-piainana.
Ho lasa tsara tarehy ny fiainana rehefa tena faly ianao. Hahita ny toerana falifaly ianao. Mety ho hitanao koa ny filàna iray izay tsy mbola fantatrao akory. Ny fitiavana ny tenanao dia midika hoe mifandray amin'ny tena toetranao.
Rehefa miharihary hatrany ny tenanao dia manomboka tia ny tenanao bebe kokoa ianao. Mampifaly anao ary vonona ny hanaparitaka ny fifaliana amin'ny hafa koa ianao.
Noho izany dia zava-dehibe ny tsy manadino ny tenanao eo amin'ny fitadiavana ho lasa olona tsara eo imason'ny hafa na eo amin'ny fikarakarana ireo tia. Mikolokolo tsara ny laharam-pahamehana sy ny hafa ary koa miara-mitombo mba hanana fiainana tsara tarehy.
Tsara ny maraina maraina
Fanamarihana ara-tsindrimandry mahafinaritra
Hafatra mahafinaritra amin'ny fiainana
Quotes tsara tarehy
Fanamarihana mahafinaritra eo amin'ny fiainana
Fanamarihana mahafinaritra miaraka amin'ny sary
Good Qué Motivational Quotes
Teny tsara momba ny fiainana
Eritreritra tsara amin'ny Andro
Teny arahin'asa momba ny fiainana
Andriamanitra no mpihaino tsara indrindra, tsy mila mihorakoraka, na mitomany mafy ianao. Satria Izy aza mihaino na dia ilay vavaka mangina nataona tso-po aza. - Anonyme
Amin'ny fiainana indraindray dia mandalo fotoan-tsarotra isika indraindray. Ireo fotoan-tsarotra ireo dia tsy azo ihodivirana. Ianao dia tokony…
Ny fanampiana olona iray dia mety tsy hanova an'izao tontolo izao fa afaka manova an'izao tontolo izao ho an'ny olona iray. - Anonyme
Ny fanampiana olona iray dia mety tsy hanova an'izao tontolo izao fa afaka manova an'izao tontolo izao ho an'ny olona iray. - ...
Noho ny ataonao lava kokoa noho ny hafa dia tsy midika hoe tsy fahombiazana ianao. Tohizo hatrany. - Anonyme
Noho ny ataonao lava kokoa noho ny hafa dia tsy midika hoe tsy fahombiazana ianao. Tohizo hatrany. - ...
Manantena ny tsara indrindra, miomàna amin'ny ratsy indrindra, ka ento izay manjo anao. - Anonyme
Manantena ny tsara indrindra, miomàna amin'ny ratsy indrindra, ka ento izay manjo anao. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Ny mijoro irery irery no tsara kokoa noho ny fiarahana amin'ny olona manisy ratsy anao. - Anonyme
Ny mijoro irery irery no tsara kokoa noho ny fiarahana amin'ny olona manisy ratsy anao. - Teny nindramina tsy fantatra anarana: